Khilaafyo noocee ah ayaa shirarkan looga doodayaa xalintooda? Mase jiraan khilaafyadaasi
Yaa fulin doona go’aamada ka soo baxaya shirarkan?
Mase jiraaan qaabab kale oo caqabooyinka Puntland wax looga qaban karo?
Inaysan dowlada Puntland difaacin soona dhicin dhulka maqan
Inaysan taageerin xoogaga xornimo u dirirka
Inaysan soo dhawayn siyaasiyiinta beesha
Inay hoosta xiriir wada hadal iyo iskaashi kala leedahay Somaliland
Iyo inay had iyo goor dowladu soo dhawaysato kuwa aan magac iyo sumcad ku dhex lahayn deegamadaasi balse ahba dadka dhibka keenay sababtana u ahaa dhulka maqan iyo dhiiga daatay.
Khilaafka Issimada oo ah mid ka dhashay adeegsiga siyaasiyiinta ama doorka xulista kuraasta Baarlamaanka.
Cabashooyinka beelaha ee ku aadan xoog u sheegashada, sadbursiga iyo ka maqnaanshaha saaxada siyaasada oo ah mid ka dhashay hayb hayb-kale masiirkeeda rabta inay ka taliso iyadoon cidina u irkan.